ချေးမှုခံနိုင်ရည်ရှိသော SS သံမဏိစစ်ထုတ်အိတ်လှောင်အိမ် China Manufacturer
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: အိတ်လှည်းစစ်ထုတ်,သံမဏိစစ်ထုတ်အိတ်အိတ်များ,ချေးခံနိုင်ရည်အိတ်ကိတ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > ချေးမှုခံနိုင်ရည်ရှိသော SS သံမဏိစစ်ထုတ်အိတ်လှောင်အိမ်
 ချေးမှုခံနိုင်ရည်ရှိသော SS သံမဏိစစ်ထုတ်အိတ်လှောင်အိမ်
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအိတ်စစ်ထုတ်ရန်အိတ်များ / အိတ် filter ကိုလှောင်အိမ် / filter ကိုလှောင်အိမ် / filter ကိုအိတ်လှောင်အိမ်
Pulse ဂျက်အိတ်စစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာများအလုပ်လုပ်သောအခါဖုန်မှုန့်လေစီးဆင်းမှုသည်စစ်ထုတ်အိတ်၏အပြင်ဘက်မှအတွင်းသို့သွားသည်။ ဒါကြောင့် filter အိတ်ကသူတို့ပုံသဏ္supportingာန်ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ frame (filter cell) လိုအပ်တယ်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော filter အိတ်များကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူထောက်ပံ့ဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဆင်ရေးလိုင်းထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်နည်းပါးသောထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ CNP ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတိုင်းတွင်တိကျသော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတိုင်းအတွက်အလွန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကကုန်ချောတစ်ခုစီကိုဖောက်သည်များထဲမှပထမဆုံးရွေးချယ်သူဖြစ်လာသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ နည်းပညာများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအာမခံချက်ကိုပေးခြင်းဖြင့်ဖုန်မှုန့်လှောင်အိမ်၏ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖောက်သည်များတောင်းဆိုသကဲ့သို့ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အမျိုးအစားများ - ပတ် ၀ န်းကျင် / ပြားချပ်ချပ်ပုံစံ / စာအိတ်စတိုင် / အထူးပုံစံ
ဝါယာကြိုး အရေအတွက် - 8/10/12/16/20/24 ဒေါင်လိုက်ဝါယာကြိုးများ
Ring Space - လက်စွပ်အကွာအဝေးသည် ၆ လက်မသို့မဟုတ် ၈ လက်မဖြစ်သည်။ (15.24cm or 20.32cm)
Cage အချင်း: Cage အချင်း4လက်မမှ 8 လက်မ (100mm မှ 200mm) အထိရှိသည်။
ဝါယာကြိုးအထူ - ၂.၅ မီလီမီတာမှ ၅ မီလီမီတာအထိရှိသည်
ပစ္စည်း: ကာဗွန် Stee, သွပ်ရည်စိမ်, သံမဏိ
အပြီးသတ်: Epoxy, PVC ဗီ နိုင်း အဖုံး
ထုပ်ပိုးခြင်း - အိတ်များကိုစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပုံးများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်
အသုံးပြုခြင်း - ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ သံမဏိဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်း၊ စက္ကူလုပ်ငန်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောသတ္တုတွင်း၊ သစ်၊ စက်ရုံ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ဓာတု၊ ဆေးဝါး၊
သံမဏိဖြင့်အခြားအိတ်များ Cage ထက် ၃-၅ ဆ ၃ ဆသက်တမ်းပိုရှည်သည်
4. စီးပွားရေးအရပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (လုံးဝကို Maintenance မလိုအပ်)
Pulse အားဖြင့် Filter မှဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအတွက် 5. ထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု
7. အဘယ်သူမျှမ ventury တပ်ဆင်လိုအပ်သည်
အဆောက်အ ဦး နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး
ဘိလပ်မြေ၊ မီးဖိုဖုန်မှုန့်၊ ဂျိုက်စ်၊ ထုံးကျောက်၊ ထုထည်ရှိသောလင်းကျောက်၊
ကယ်လ်ဆီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်၊ ခဲ monoxide၊ quicklime, acid crystals၊
ရွှံ့၊ သန့်စင်သောဖော့စဖိတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါဝင်မှု၊
ရော်ဘာဒြပ်ပေါင်းများ, sinter ဖုန်မှုန့်, ​​ဓာတ်ကူပစ္စည်း
Silo များ / တင့်ကားများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းကာကွယ်မှုအတွက်စံတင်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ အိတ်စစ်ထုတ်စက်ကိုကွန်တိန်နာပေါ်တွင်ကပ်ပါလိမ့်မည်။ စစ်ထုတ်အိတ်နှင့်အိတ်များကိုသွပ်သေတ္တာနှင့်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်တပ်ဆင်လိမ့်မည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: အိတ်လှည်းစစ်ထုတ် , သံမဏိစစ်ထုတ်အိတ်အိတ်များ , ချေးခံနိုင်ရည်အိတ်ကိတ် , အိတ်ကိတ်အရိုးစစ်ထုတ် , ဖိုင်ဘာဖန်စစ်ထုတ်အိတ် , ဘွိုင်လာဖုန်စစ်ထုတ်အိတ် , ဖန်မျှင်ထည်စစ်ထုတ်အိတ် , PE Polyester ဓာတုဖုန်စစ်ထုတ်အိတ်